Raadinta Wadada Saxda Ah Ee Horumarinta Shaqsiyadeed |Tukesomalism.com | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Tuke Somalism — April 3, 2016
Waa inaad qaadataa go’aanka ah inaad bilowdo safarkii shaqsiyadeed ee dhinaca hormarinta naftaada, hadii aad qaadato go’aankaan waxaa hubaal ah inaad qaaday talaabadii koobaad ee dhinaca mustaqbal ifaya. Inkastoo safarka aad ku tahay keli, waxaa lagaaga baahanyahay dulqaad iyo samir dheeraad ah si aad uga mira dhaliso hadafkaaga shaqsiyadeed.
Hadii aad hadafkaaga ku adkaato waxaad gaari doontaa hormar jismiyadeed, dareen, iyo mid caqli iyo hamilo fog leh.
Hadaba talaabooyinka hoos ku xusan waxay kaa kaalmeynayaan inaad awood buuxdo u hesho higsigaaga.
Waa inaad noqotaa shaqsi himilo sare leh, himilada sare waxa ay kaa caawineysaa inaad udhabar adeegto ujeedkaaga shaqsiyadeed. Shaqsiga hadii uusan himilo laheyn wax weyn baa ka halaysan.
Waa inaad diirada saartaa halka aad higsanayo aadna daaha ka qaadaa halka ay dantaada taalo taasoo cadeyn u ah hormarkaaga .
Waa inaad isweydiisaa xaalada aad ku sugantahay oo aad qiimeysaa awoodaada shaqsiyadeed adna ogaataa halka aad ka liidato.
Waa inaad isweydiisaa hamigaaga inta uu la egyahay.
Waa inaad isweydiisaa sida aad ku gaari kartid iyo sababta aad uga baahantahay inaad gaarto hadafkaan aad bartilmaamedsanayso.
Waa inaad isweydiisaa qibrad noocee ah ama aqoon noocee ah baad u baahantahay sida aad ku gaari lahayd hadafka aad rabto inaad gaarto.
Waa inaad qoraal usameysaa ama liista aad usameysaa caqabadaha ama dhacdooyinka aad la kulmi karto xiliga aad safarka ku jirto, una adeegso dhacdooyinkaas ama caqabadaha isabaaro ku hortaal oo ku aadan hadafkaaga hormarineed ee aad ku taameyso.
Hadii aad raacdo tilmaamahan waxaa hubaal ah inaad hadafkaaga aad ku hormarineyso shaqsiyadaada inaad gaarayso.
Tags: Raadinta Wadada Saxda Ah Ee Horumarinta Shaqsiyadeed |Tukesomalism.com
Next post Sahal Issack, My Autobiography |Tukesomalism.com
Previous post Somali Is a Dump Site For The World Companies To Dump Toxic Wastes |Tukesomalism.com